Chief Accountant Archives - Page2of3- Glory Assumption Space
Chief Accountant ( AP, AR ) - M/F (5) Posts /လစာ- ၇၀၀,၀၀၀/- ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့နယ်
Cheif Accountant ( AP, AR ) - M/F (5) Posts /လစာ- ၇၀၀,၀၀၀/- ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့နယ် B.Com ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ (CPA) (OR) B.Com (ACCA- Part II passed) (OR) Other Bachelor Degree+CPA(or) ACCA (or) IFRS အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အသက်(၃၀)နှစ်- (၃၅) ကြားရှိရမည်။ Computer Accounting Software(MYOB)သုံးတတ်ရမည်။ Accounting Field ထဲမှာ အနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ Chief Accountant Level ဖြင့် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် လုပ်သက်ရှိရမည်။ Under Pressure တွင် လုပ်နိုင်ရမည်။လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chief Account - Female (5) Posts/Salary- 1,000,000 Kyats
Salary Rang : 1000000-1500000
1. Chief Account – Female (5)Posts / Salary – 1,000,000 Kyats (above)/Thingangyun Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - CPA ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၄၅) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိရမည်။
Chief Accountant (AP,AR) – M/F (5)Posts
############# Urgent Requirement ############## မင်္ဂလာပါရှင့် ။ ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Chief Accountant (AP,AR) – M/F (5)Posts/Salary – 900,000 Kyats/Dagon Township - B.Com ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ CPA (or) ACCA Part II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အခြားဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ပါက CPA (or) ACCA (or) IFRS အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Accounting Software (MYOB) သုံးတက်ရမည်။ - Accounting Field ၌ လုပ်သက် (၁၀)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ - Chief Accountant Level ဖြင့် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (၅)နှစ်ရှိရမည်။ - Under Pressure တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်၍ လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ - အသက် (၃၀) မှ (၃၅) နှစ်အတွင်း ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chief Account - Female (6) posts / Salary -700,000 Above Kyat .
********* URGENT REQUIREMENT********* GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိသော တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်း အမြန်အလိုရှိပါသည်။ 1. Chief Account – Female (6)Posts /Salary – 700,000 Above Kyat / Mingalar Taung Nyunt Township. - B.Com (or) LCCI I,II,III ပြိးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - ACCA Part2, CPA လက်မှတ်ရထားသူဖြစ်ရပါမည်။ - Chief Account နှင့်ပက်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရပါမည်။ - English စကားပြောကောင်းမွန်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chief Account- Female (5) Posts
Chief Accountant – Female (5) posts /Salary -1,000,000Kyats (above) /MingalarDone Township. - Graduated or B.com More Prefer - At Least (5) Years Experiences in Relate Field - Age Between 30 to 45 - Company Will Provide Ferry
1. Chief Account- Female (5) Posts/Salary- 1,500,000 Kyats/ှSanchaung Township. - B.com,CPA (or) ACCA - Chief Account ဖြင့်လုပ်သက် (၅) နှစ်ရှိရမည်။ - အခြား Account ပိုင်းဖြင့် (၁၀) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၃၅ နှစ် အထက်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chief Accountant- Male/Female (5) Posts
Chief Accountant - M/F(5) Posts /Salary -1000000 Kyats /Dagon Township BCom(CPA) (OR) BCom (ACCA- Part II passed) ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည် (OR) Other Bachelor Degree+CPA(or) ACCA (or) IFRS အောင်မြင် ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အသက်(၃၀)နှစ်- (၃၅)ကြားရှိရမည်။ Computer Accounting Software(MYOB) သုံးတတ်ရမည်။ Accounting Field ထဲမှာအနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ Chief Accountant Level ဖြင့် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် လုပ်သက်ရှိရမည်။ Under Pressure တွင် လုပ်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်ပါကအချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။
Chief Accountant Female (3) Posts /Salary - 500,000 Above Kyats
************************ Ugarent Requirement ************************* မင်္ဂလာပါ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၊ ဘုရင့်နောင်မြို့နယ်များတွင် ရှိသော ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Chief Accountant Female (3) Posts/Salary -500,000 Above Kyats/Shwe Pyi Thar /Ba Yint Naung /Kamayut. - B.Com , CPA အောင်မြင်ထားပြီးအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - အသက် (၄၀) နှစ်အောက် ၊ Computer စာရင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီးစေ့စပ်သေချာရမည်။ - Internet , Email အသုံးပြုနိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းရမည်။ - Final Account ထိစာရင်းဆွဲနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Chief Accountant - Male/Female (5) Posts / Salary 800000 Kyats
************** URGENT REQUIREMENT *************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Chief Accountant - Male/Female (5) Posts / Salary 800000 Kyats /Dagon Township Requirements -	B.Com(CPA) (or) B.Com (ACCA – Part II passed) (or) Other Bachelor Degree+CPA (or) ACCA (or) IFRS အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -	အသက် (၃၀)နှစ် (၃၅)နှစ်ကြားရှိရမည်။ -	Computer Acconting Software (MYOB) သုံးတတ်ရမည်။ -	Accounting Field ထဲမှာအနည်းဆုံး(၁၀)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ Chief Accounting Level ဖြင့်အနည်းဆုံး(၅)နှစ်လုပ်သက်ရှိရမည်။ -	Under Pressure တွင်လုပ်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်ပါကအချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Chief Accountant - Female (5) Posts
Chief Accountant - Female (5) Posts/ Salary (500,000) above Kyats/ Shwe Pyi Thar Township Yangon - B.Com - LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၈) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Chief Accountant – female (5)posts/Salary-800000Ks/Sanchaung Township. -ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမည်။ -LCCI Level (I,II,III) -(UK) Exam ပြီးသူကိုဦးစားပေးမည်။ -အတွေ့အကြုံ (၄)နှစ်အထက်ရှိရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Chief Accountant – Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Chief Accountant – Female (5) Posts / Salary Above 500000 / Shwepyithar Township Requirements - B.Com - LCCI Level (3) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက်(၂၈)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Chief Accountant – Female (5) Posts /Salary – 800000 Kyats and above /Botathaung Township - B.Com ,ACCA Part II ပြီးမြောက်ရမည်။ - အသက် ၃၀ အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Hotel Experience ၅ နှစ်ရှိရမည်။ - ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး အသက်အရွယ်လျှော့ပေါ့ စဉ်းစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Salary Rang : 600000-1000000
မင်္ဂလာပါရှင့် ။Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Chief Accountant - M/F (1) Post/Salary -600000 Kyats to 1000000 Kyats / Dagon Township -BCom,CPA (or) ACCA(or)IFRSဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရပါမည်။MYOB Software အားကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။International Accounting Standard ကိုနားလည်ပြီးကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိင်သူဖြစ် ရပါမည်။ Accountant(၅)နှစ်နှင့်Chief Accountant လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ် စုစုပေါင်း(၁၀)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ အသက်(၃၀)နှစ်မှ (၃၅)နှစ် အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းခွင်မှဖိအားများဧ။် ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းမှချမှတ်ထားသော ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတွင်း ကြီးကြပ်မှု့စနစ်အား မသွေမတိမ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင် သူဖြစ်ရပါမည်။ မိမိဧ။် စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းပေး ပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Chief Account –Female(2)Posts
Location in : Bago
- တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိရမည်။ - CPA /ACCA Part II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။